Kitapon'alika azo simba tsara indrindra | World Dogs
Kitapo diky alika biodegradable tsara indrindra
Nat Cherry | | Fitaovana alika
Mihamitombo hatrany ny fahatsiarovan-tena momba ny olan'ny tontolo iainana, ary angamba izany no mahatonga ny fahitana ny kitapo fako alika azo simbaina. mba tsy ho lasa fandotoana ho an'ny planetantsika koa ny fanangonana ny dikin'alikantsika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia tsy hiresaka momba ny tsara indrindra biodegradable alika kitapo fako izay hitantsika amin'ny Amazon, fa hiresaka momba ny maha-izy azy, ny karazany samihafa ary ny fomba hanavahana azy ireo isika. Ary koa, raha liana amin'ity lohahevitra ity ianao dia manoro hevitra ity lahatsoratra hafa momba ny kitapo poop ho an'ny alika ity ihany koa izahay.
Edipets, Poop Bags...
Kitapo mivoaka ...
Nova Imboxs 330 Bags...
120 Kitapo alika ...
Kitapo mandeha tongotra maintso...
1 kitapo poop alika biodegradable tsara indrindra
1.1 Kitapo feno komposta vita amin'ny katsaka
1.2 Kitapo vita amin'ny vovo-katsaka 50%.
1.3 kitapo polyethylene avo lenta mora
1.4 Kitapo biodegradable avo lenta
1.5 600 harona poop lehibe fanampiny
1.6 Bioplastic poop scooper
1.7 Kitapo poop biodegradable
2 Nahoana no mifidy kitapo biodegradable?
3 alternativa biodegradable
3.1 Kitapo azo simba tanteraka
3.2 50% plastika
4 Ahoana no ahafantarana raha biodegradable ny kitapo
5 Aiza no hividianana kitapo fako alika biodegradable
kitapo poop alika biodegradable tsara indrindra
Kitapo feno komposta vita amin'ny katsaka
Maherin'ny roa arivo hevitra ao amin'ny Amazon no manohana ity modely ity ho tsara indrindra amin'ny harona fako alika azo simbaina. Ny fitaovana nanaovana azy dia avy amin'ny katsaka, tena mahatohitra izy ireo, misokatra tsy misy ezaka ary tsy misy fofona na fofona. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fanarahana ny taratasy fanamarinana OK Compost an'ny Vondrona Eoropeana sy Etazonia. Aorian'ny fampiasana dia ho lo ny kitapo ary tsy handoto ny tontolo iainana ny ambiny tavela. Ankoatra izany, dia tonga miaraka amin'ny kitapo mba hitondrana azy ireo ho fanomezana.
Kitapo vita amin'ny vovo-katsaka 50%.
Somary mora kokoa noho ny modely teo aloha, tsy azo simba tanteraka ireo kitapo fanangonana ny diky ny alikanao., na dia misy vovon-katsaka 50% aza izy ireo ary ny antsipiriany (toy ny horonana ao anaty kitapo) dia vita amin'ny akora azo averina toy ny baoritra. Izy ireo dia tena lehibe sy mahatohitra, ary koa ny tantera-drano tanteraka. Ny fonosana tsirairay dia misy kitapo telonjato mizara ho horonana roapolo misy kitapo dimy ambin'ny folo avy.
kitapo polyethylene avo lenta mora
Raha mitady kitapo mora nefa tsy tena ratsy amin'ny tontolo iainana ianao, dia tsy ratsy io safidy io. Na dia mety ho ara-tontolo iainana kokoa aza izy ireo (vita amin'ny polyethylene avo lenta, izay azo averina mora foana, na dia mbola mandoto aza), dia lehibe, mahatohitra, mahazo aina tsara ny mitafy ary manana fahafahana ampy. Ary koa, mitondra fitoeran-kitapo fanomezana. Misy kitapo 330 isaky ny fonosana.
Kitapo biodegradable avo lenta
Marika Amazon - Kitapo Umi...
Ny kitapo Umi dia tsy vitan'ny hoe mampanantena vokatra avo lenta, mahatohitra, tsy misy lets sy menaka manitra ary manana fahafahana lehibe, fa koa azo simba tanteraka izy ireo, satria mampanantena izy ireo fa vita amin'ny akora azo zezika ny kitapony, indrindra fa avy amin'ny hydroéthylamidon.. Ny marika dia mampanantena fa ny kitapo dia rava ho azy ao anatin'ny 18 volana ary nandalo ny fenitry ny kalitaon'ny Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana. Fanampin'izany, azonao atao ny misafidy eo amin'ny dikan-teny roa, ny iray miaraka amin'ny tahony (hamatotra ny kitapo sy ny fitaterana azy mora kokoa) ary ny iray tsy misy. Ny fonosana ihany koa dia tsy ara-tontolo iainana ary mora azo averina.
600 harona poop lehibe fanampiny
Raha mamboly sequoia mihoatra noho ny kesika ny alikanao, dia mety mila kitapo lehibe kokoa ianao. Ireo Alemà ireo ary misy diky ao anaty fonosana (tsy mazava kokoa) dia manatanteraka izay nampanantenainy: tsy mihoatra na latsaky ny kitapo 600 eo ho eo amin'ny 30 sm tsy misy microplastika ary fampanantenana hanary tsy hamela ny sisa, ary hanana ny OK Compost antoka tombo-kase ny Vondrona Eoropeana hanaporofoana izany. Ankoatra izany, izy ireo dia tena mateza, tsy misy fofona, ary tsy misy fofona ary tsy misy fofona.
Bioplastic poop scooper
Kitapo azo simba...
Vokatra mahaliana sy ara-tontolo iainana izay tsy maintsy deraina noho ny fahatsorany, satria manome toky izy ireo fa vita amin'ny katsaka indrindra izy ireo., fa koa avy amin'ny derivatives petrole (izay, araka ny azonao eritreretina, dia tsy dia tsara loatra). Ho setrin'izany, mitatitra izy ireo fa na dia misy singa toy izany aza izy ireo, dia manana singa simika izay mamela azy ireo hanimba azy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Ny kitapo dia manana tombo-kase OK Compost an'ny Vondrona Eoropeana ary tena mahatohitra, ankoatra izany, manana tantana izy ireo, izay mahatonga azy ireo ho mora kokoa ny manidy sy mitondra.
Kitapo poop biodegradable
Farany, kitapo hafa izay tena azo simbaina (milaza isika hoe "kely" satria, toy ny ankamaroan'ny vokatra, dia misy ampahany vita amin'ny vovo-katsaka ihany). Amin'ity tranga ity dia misy kitapo maitso 240 eo ho eo, miaraka amin'ny fonosana vita amin'ny baoritra, izay mora azo averina ihany koa. Na izany aza, ny fanehoan-kevitra sasany dia milaza fa somary manjavozavo izy ireo ary sarotra ny misokatra, ka raha te ho any amin'ny efitra fandroana ny alikanao dia mety mila zavatra mahatohitra kokoa ianao.
Nahoana no mifidy kitapo biodegradable?
Amin'izao fotoana izao, ary mihamitombo hatrany, omena lanja be ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'ny olombelona amin'izany (antsoina hoe dian-tongotra ekolojika). Efa ela loatra isika olombelona no nampiasa fitaovana manimba ny tany toy ny plastika, izay maharitra taonjato maro vao miharatsy sy manjavona. Raha ny marina, na dia miharatsy aza izy, dia mamela soritra microplastika izay azo antoka fa hanimba antsika satria, ankoatra ny zavatra hafa, dia miafara amin'ny fihinan'ny trondro (ary fantaro hoe iza no mihinana trondro).
Noho izany antony izany, ary amin'ny fiheverana fa ny alika dia manamaivana ny tenany, toy ny mahazatra, imbetsaka isan`andro, dia tena soso-kevitra ny hifidy ny vokatra hanangona poop fa ara-tontolo iainana araka izay azo atao izany, ary noho izany dia manamaivana ny dian-tongotsika eto an-tany.
Noho ny fanahiana somary vaovao, Mbola ao anatin'ny dingana andrana kely momba ny "plastika vaovao" isika., izany hoe fitaovana mitovitovy amin'ny plastika nefa vita amin'ny fitaovana hafa tsy dia mampidi-doza. Ao amin'ny tsena dia afaka mahita:
Kitapo azo simba tanteraka
Izy ireo no manaraka ny fitsipiky ny USA (lax kely kokoa) sy ny an'ny Vondrona Eoropeana. Izy ireo dia vita amin'ny fitaovana izay, araka ny voalazanay, dia mitovy amin'ny plastika fa tsy misy polymère ary vita amin'ny legioma hafa, toy ny katsaka. Mampanantena izy ireo fa hanaisotra izany ao anatin'ny zato andro ary tsy hamela karazana loto maloto. Ao anatin'io karazana kitapo io indray dia misy azo simbaina (izay rava noho ny asan'ny microorganisms) na compostable (mirodana amin'ny fepetra manokana izy io ary mamela zezika).
Tsy izy ireo no safidy tsara indrindra, na dia mampanantena aza izy ireo fa handoto ny antsasany, satria mbola manohy mandoto izy ireo. Izy ireo dia vita amin'ny plastika 50% ary akora azo simbaina 50%, ka ny ankamaroany dia vita amin'ny katsaka, ohatra. Ny ankamaroan'ny vokatra amin'ity karazana ity dia miaraka amin'ny horonana anaty baoritra sy fonosan'ny taratasy recycled. Ny hany tsara dia ny hoe izy ireo dia somary mora kokoa noho ireo izay biodegradable tanteraka.
Indraindray ny vahaolana mahazatra indrindra no tsara indrindra. Raha mila vokatra azo simba tanteraka ianao izay tsy mamela soritra amin'ny tany ary mora vidy dia tsara ny mampiasa taratasy. Tsy dia mahazo aina kokoa noho ny harona plastika, io no nampiasainay taloha mba hanangonana poi-doggies. Na dia azo atao aza ny mampiasa clínex, ny tena mahazatra dia ny gazety: tsy misy maharesy ny ekolojika sy mora vidy.
Ahoana no ahafantarana raha biodegradable ny kitapo
Ny fomba tsara indrindra hijerena raha biodegradable na azo zezika ny kitapo dia amin'ny alalan'ny tombo-kaseny, izay hanamarina raha manaraka ny fepetra takian'ny Etazonia na ny Vondrona Eoropeana.
Ankoatra izany, raha vao jerena ary na dia toa mitovy amin'ny harona plastika aza izy ireo, harona biodegradable na compostable. Misy singa mampiavaka azy ihany koa izy ireo, ohatra, ny fikasihana, satria mirona ho mafy kokoa izy ireo, na ny fofona, izay matetika somary mahery kokoa noho ny plastika.
Aiza no hividianana kitapo fako alika biodegradable
Azonao atao mividy kitapo hanangonana ny dikin'ny alikanao amin'ny toerana maroNa izany aza, tsy ny rehetra amin'izy ireo no hahita mora foana ny modely izay biodegradable. Anisan'ny mahazatra indrindra dia:
En Amazon manana, tsy isalasalana, ny isan'ny harona diky alika azo simba indrindra eny an-tsena. Na izany aza, indraindray ny vokatra dia mety ho diso anarana na mamitaka, satria maro no tsy azo simba tanteraka. Ny torohevitra tsara alohan'ny hividianana na inona na inona dia ny mijery ny hevitra, satria maro ny mpampiasa no mahafantatra tsara an'io karazana zavatra io.
En fivarotana an-tserasera manokana toy ny TiendaAnimal na Kiwoko dia azo atao koa ny mahita karazana kitapo maro. Amin'ity tranga ity, mendrika ny manararaotra ny iray amin'ireo fihenam-bidy na fisondrotana maro mba hahatonga azy ho mora kokoa.
Farany, ao amin'ny fivarotana manokana amin'ny vokatra ampiasaina tokana, toa an'i Monouso, dia hahita vokatra be dia be koa ianao manatanteraka ny asany nefa tsy manimba ny tontolo iainana.
Ny kitapo fako alika biodegradable dia vokatra izay, rehefa ampiasaina isan'andro, dia zava-dehibe mba ho madio araka izay azo atao, sa tsy izany? Lazao anay, mampiasa karazana kitapo ve ianao? Manoro hevitra anay ve ianao? Karazana vokatra inona no ampiasainao haka ny diky ny alikanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Kitapo diky alika biodegradable tsara indrindra
Tady ho an'ny alika hanaikitra: ny modely tsara indrindra sy ny toro-hevitra
Ny tsihy fofona tsara indrindra ho an'ny alika